को नतीजा आश्रय मा खेलाडी सामना मुख्य समस्या, - यो उत्पादन वा ऊर्जा को प्रावधान छैन सामान वा कलाकृतिहरू, र जनसंख्या वृद्धि को लागि एक खोज छ। मान्छे बिना तपाईं wasteland अन्वेषण गर्न सक्दैन, वा कार्यहरू प्रदर्शन, वा स्रोतहरू निकाल्न। आज हामी नतीजा को आश्रय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू एक देखो: "कसरी जन्म दिन बच्चाहरु?"।
"प्रेम पहाड सार्न सक्छ।" आफ्नो आश्रय साना पुस्ता सुनिश्चित गर्न, सबै पुरुष र महिला ले र उनलाई जीवित कक्ष मा राखे। त्यहाँ धेरै बन्दोबस्त अवस्था हो।
आवासीय एकाइहरु को संख्या मा निर्भर संख्या। त्यो तपाईं सिर्फ एक कोठा निर्माण यदि, तपाईं 1 महिला र 1 मानिसलाई राख्न सक्छ, र समलिङ्गी मान्छे बसोबास गर्न सम्भव छैन, छ। तपाईं अर्को दुई कोठा संयोजन भने, यो फरक सेक्स वा एकै समयमा चार मा नै सेक्स दुई व्यक्तिका लागि सम्भव हुनेछ। तर यो मामला मा उनि बस एक राम्रो कुराकानी हुनेछ।
नजन्मेको बच्चाको मानकहरु आमाबाबुले निर्भर छैन। तपाईं प्राप्त समेत उनलाई, अधिकतम गर्न पम्प्ड एकदम mediocre व्यक्ति जन्म।
अधिकतम सूचक करिश्मा संग बासिन्दा प्रयोग प्रलोभन प्रक्रिया गति गर्न।
तपाईं बुबा र छोरी वा आमा र छोरा संग बसोबास गर्न प्रयास भने, तिनीहरू परिवार सँगै हुन्छ जब, कसरी राम्रो कुरा हुनेछ।
त्यसैले, पहिलो चरणको पूरा भएको छ। आफ्नो आश्रय नतीजा आश्रय गर्भावस्था चाँडै पर्याप्त हुनेछ मा, तर अझै पनि त्यहाँ आफ्नो पाठ्यक्रम गति केही तरिकाहरू छन्।
तर गरेको इमानदार प्ले र गर्भावस्था अघि सामान्य देखि फरक हेर्नुहोस् एक महिला एक बच्चा भालु बीच आफ्नो इन्धन ट्यांक को बासिन्दा बढाउने प्रयास गरौं।
त्यो धेरै बिस्तारै उत्प्रेरित गर्छ।
बुरा काम। बाटो गरेर, गर्भवती स्वतः काम गर्न यसको कक्ष फर्कन गर्दैन। तपाईं स्वयं यो अनुवाद गर्न हुनेछ।
को चोरी र आगोले लड्न छैन।
यसलाई मर्न सक्दैन।
त्यसैले, तपाईं मात्र गर्भवती महिला को निर्वाचकगण, "अमर" आश्रय सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एक अवस्था सामना गर्नेछ किनभने कुनै पनि आक्रमण, अनन्त हुनेछ - तर, कमी हुनेछ। खातामा लिन यो कारक र एक कोठा गर्भवती महिला को मात्र काम नछोड, अन्यथा खतरा सम्पूर्ण इन्धन ट्यांक नतीजा आश्रय फैलियो गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी यी अवस्था केटाकेटीलाई जन्म दिन? का विकल्प खोज्न गरौं।
वितरण र समय
छैन खाली वाक्यांश - तपाईं आफ्नो नतीजा आश्रय "गर्भावस्था" सँगै परेवा को एक जोडी ल्याउन व्यवस्थित र अब। तपाईं बायाँ गरेका सबै गर्दा एक बालक जन्मिएको छ लागि प्रतीक्षा छ। कृपया ध्यान दिनुहोस् अवधारणा देखि प्रसब 4:00 बित्दै छ, आफूलाई जन्म बच्चा देखा गर्दैन - तपाईं निश्चित खेल जानुहोस् र यो प्रतिमामा क्लिक गर्न आवश्यक छ। कि पछि, तपाईं बच्चा को नाम चयन गर्न मौका दिइनेछ। तपाईं एक क्रेडिट पूर्वनिर्धारित प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, नाम उनको पिता देखि उधारो गरिनेछ। यो धेरै, सुविधाजनक भविष्यमा नातेदार ल्याउन प्रयास छैन।
अब तपाईं नतीजा आश्रय मा अवधारणा र जन्म बारेमा थाहा छ। कसरी छोराछोरीलाई छ तपाईं को लागि एक गोप्य छैन। त्यसपछि माथि बढ्दै अवधि पछि लागे। समय आश्रय निवासी अझै पनि invulnerable र खतरा को मामला मा जीवित कोठा मा लुकाउने यस अवधिमा। तथापि, गर्भवती महिला गर्न यसको विपरीत, छोराछोरीलाई काम छैन र अध्ययन छैन, र अझै स्रोतहरू खपत, को Silo वरिपरि झुन्डिएको।
को नतीजा आश्रय मा खेलाडी अर्को चासो, - को गर्भावस्था गति कसरी? साँच्चै, सारा प्रक्रियाको बारेमा 8 घन्टा लाग्छ र यो अवस्था मा छ प्लेयर सही वितरण को समय ट्र्याक कि र समय तिनीहरूले "स्वीकार" भनेर आउनेछ।
दुर्भाग्यवश, खेल गर्भावस्था गति कुनै कानुनी हालतमा छ। त्यसैले, कुनै पनि मामला मा तपाईं निर्दिष्ट समय प्रतीक्षा छ, वा प्रयोग नतीजा आश्रय Cheats। तर, तुरुन्तै आश्रय नयाँ बासिन्दा Replenish हुनेछ जो वैकल्पिक छ।
तपाईं शायद पहिले नै आफ्नो मालिकहरूलाई ल्याउन जो वार्ड र बोनस बारेमा थाहा छ। यी सुधार को एक वृद्धि गर्न छ जोडाहरू जन्म दिने सम्भावना। त्यसैले, तपाईं गर्भावस्था को समय छोटो सक्दैन, तर एक समयमा थप बच्चाहरु हुन सक्छ। यो बोनस निम्न जनावर दिएको छ:
मानद्वीप बिरालो नस्ल।
पौराणिक बिरालो Stubbs र शेक्सपियर।
पौराणिक कुकुर Pongo र भाग्यमानी।
तपाईँले खेल कोड, तपाईं को लागि त निम्न सल्लाह मा loopholes प्रयोग गर्न घृणा छैन भने थिएन। आफ्नो ग्याजेट मा प्रणाली समय पनि कस को नतीजा आश्रय संग पारस्परिक भन्ने तथ्यलाई। रात अनुरूप समय एक बच्चा कसरी गर्ने? बस अगाडि प्रणाली मिति परिवर्तन वा घडी उल्टा। कि पछि, तपाईं तुरुन्तै gestation चक्र पूरा हुनेछ। तर हुन होसियार - उल्टा समय जो अग्रिम थाहा राम्रो छ, जोखिम समावेश।
समय उल्टा गर्न धेरै टाढा अगाडि छन् भने, आफ्नो चरित्र परती भूमि मर्न सक्छ। पुनर्जीवित ढाक्न वा बस रद्द अग्रिम तयारी गर्नुहोस्। त्यसैले उनले फिर्ता छिटो आउन गर्नुपर्छ।
कोठा मा उपकरण उत्पादन समय मा हालको मिति फिर्ता गर्दा संवाददाता समय अन्तराल वृद्धि गर्न सकिन्छ। हामी एक गति उत्पादन समाधान।
जब तपाईं समय उल्टा र खेल को हालको मिति फर्कन यात्रा को लागि एक कोर-कोला प्रयोग गर्दा रचनाहरू सक्छ। को जोडनु मा rejoining उपचार।
प्रयोग कोड - को नतीजा आश्रय मा बाद विधि, कसरी जन्म prematurely दिन। दुर्भाग्यवश, यसको शुद्ध रूप मा कन्सोल आदेशहरू छैन, त्यसैले कारीगरों बाहिर बाट खेल नियन्त्रण गर्न कार्यक्रम को एक नम्बर विकास गरेका छन्।
सम्पादक बचाउँछ। क्षणमा, नयाँ संस्करण 1.7.2। यस कार्यक्रम को गर्भावस्था गति गर्न अनुमति छैन, तर यो निर्दिष्ट मापदण्डहरू आफ्नो पवित्र मन्दिरमा नयाँ भाडादारों थप्न सक्नुहुन्छ।
त्वरक समय। एक सरल कार्यक्रम भनेर खेल मा समय गति गर्न अनुमति दिन्छ। यसलाई प्रयोग गर्दा घन्टा को लागि कम्प्युटर परिमार्जन गर्न आवश्यक छैन, तर त्रुटिहरू सञ्चालन प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्छ।
प्रशिक्षक (13)। यसलाई कुनै पनि cheater गर्न उपयोगी सुविधाहरूको एक नम्बर समावेश गर्दछ। तर तपाईं को गर्भावस्था गति सक्दैन। तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्ने अधिकतम - एक महिला लामो विवाहपूर्वको बिना तुरुन्तै गर्भवती बनाउन छ।
यसरी, छैन नतीजा आश्रय राम्रो केहि गर्न Cheats मा गर्छ।
मालिक "माफिया 2" - कार्लो Falcone। वर्ण विवरण र खोज को खण्ड
के ब्लक "Maynkraft" छन्
वैज्ञानिकहरूले मोटोपना लड्न मस्तिष्क उत्तेजना प्रयोग प्रस्तावित
लेखक अल्बर्ट Likhanov: जीवनी, रचनात्मकता
SCR को विस्तार: आधारभूत फाइल प्रकार र खोल्ने लागि विधिहरू
स्नायु विज्ञान र स्नायुशल्यचिकित्सा: मा मास्को क्लिनिक Burdenko
चोटपटक लागि मलम प्रयोग कसरी र के गर्ने?
यूजीन मिलान जीवनी र अभिनेता परिवार। मृत्यु Evgeniya Milaeva को कारण
साक्षात्कार रूपमा कलम बेच्न। परीक्षण विधि
आनुवंशिक स्मृति - पछिल्लो र वर्तमान को जडान
सरल बैंक बिल